म अध्ययन गर्न आवश्यक छ in English. म अध्ययन गर्न आवश्यक छ Meaning and Nepali to English Translation
Home>Words that start with I>I need to study>म अध्ययन गर्न आवश्यक छ (Nepali to English translation)
What does म अध्ययन गर्न आवश्यक छ mean in English? If you want to learn म अध्ययन गर्न आवश्यक छ in English, you will find the translation here, along with other translations from Nepali to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is म अध्ययन गर्न आवश्यक छ meaning in English:
उहाँले धेरै राम्रो
के तिमी मलाई प्रेम गर्छौं?
तपाईं एक टाई कसरी बाँध गर्न थाहा छ?
फेरि यो भन्न, कृपया
बाँकी पैसा तपाईँ नै राख्नुहोला
म मेरो घडी हरायो
यो बुकिंग को मिति परिवर्तन गर्न सम्भव हुने थियो?